Environment | The World of Pinkgold
Live Simply – Save Environment
Posted on May 7, 2011 by cuttiepinkgold
ဒီနေ့ သူငယ်ချင်း သီတာလင်းက ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ နုတ်စ်လေးတစ်ခု တဂ်လုပ်လာပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာ နေထိုင်းခြင်းနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်တဲ့..
အဲ့ဒါလေးကတော့ မေလ (၅) ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲမှာ ဆရာမဂျူး ပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို သီတာက ကျွန်မတို့ကို ပြန်လည်မျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာမ ပြောတဲ့အထဲမှာ မှတ်သားစရာ ကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေ အများကြီးပါပါတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းရေးကိုလုပ်နေတဲ့ ကျွန်မကိုယ်တိုင်တောင် ငါ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေတတ်ပြီလား လို့ ပြန်တွေးကြည့်မိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ရှင်းစီဟာ နည်းပညာရဲ့တိုးတက်မှုတွေ ၊ ရုပ်ဝတ္ထုတွေနောက်ကို ဖိနပ်ပါးမတတ်ပြေးလိုက်ရင်း ကျွန်မတို့ရဲ့ ဘ၀ကြီးဟာလည်း ပိုမိုပြီးတော့ ရှုပ်ထွေားလာခဲ့ပါပြီ။ တောနေလူထုနဲ့ မြို့နေလူထုရဲ့ နေပုံထိုင်ပုံချင်းကလည်း အနည်းနဲ့ အများတော့ ကွာခြားကြတာပါပဲ။ တောအရပ် ဒေသတွေက လူတွေဟာ မြို့နေလူထုလောက် ဗဟုသုတ မများကြသလို ၊ နည်းပညာနဲ့လည်း အတွေ့ အထိ နည်းကြပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့တွေရဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံဟာ မြို့နေလူထုတွေထက် ပိုပြီး ရိုးရှင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် တောအရပ်ကိုသွားရင် သဘာဝရဲ့ အလှအပနဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ကျွန်မတို့ ခံစားနိုင်ကြတာပေါ့။ ဒါဆိုရင် မြို့ပေါ်မှာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဘယ်လိုနေထိုင်ရပါ့မလဲ ရှင်။
Management Your Demand – လိုချင်မှုကို ထိမ်းချုပ်ပါ
အနီးစပ်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးတာကို ထောက်ပြချင်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ ကျွန်မတို့ ဘယ်နှစ်ကြိမ် ဖေ့စ်ဘုတ်ကို ၀င်ကြည့်ပါသလဲ။ မကြည့်ပဲ ဖွင့်ထားတာမျိုးကော ရှိပါသလား။ သေချာတာကတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးမယ်ဆိုရင် အင်တာနက်ချိတ်ရမယ်။ အင်တာနက်ချိတ်မယ်ဆိုရင် ကွန်ပျူတာရှိရမယ်။ တစ်ချိန်လုံးသာ အင်တာနက် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ကွန်ပျူတာကို တစ်နေကုန် ဖွင့်ထားရမယ်.. စွမ်းအင်တွေ ပိုကုန်မယ်.. အလိုရှိသလောက်ပဲ သုံးမယ်ဆိုရင် တစ်ခြားအချိန်တွေမှာ ကွန်ပျူတာ ပိတ်ထားပြီး စွမ်းအင်ကို ချွေတာနိုင်ပါမယ်။ ဒါက ဖေ့စ်ဘုတ် ၊ အင်တာနက်သုံးတာနဲ့ ဥပမာပြလိုက်တဲ့ လိုချင်မှုကို ထိမ်းချုပ်တာပါ။ နောက်ပြီး ကျွန်မတို့ အသုံးပြုနေတဲ့ Gadget တွေ.. iPhone 3G ထွက်ပြီးလို့ မကြာခင်မှာပဲ 4G ဆိုတာ ထပ်ထွက်တယ်။ ipad ထွက်ပြီးလို့ မကြာပါဘူး.. ipad2ဆိုတာလေး ပေါ်လာပြန်တယ်။ တစ်ခုပြီး တစ်ခုကိုသာ လိုချင် ၀ယ်ချင်နေမယ်ဆိုရင် သိပ်ကို ခက်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံကုန်တာက ပြသနာမဟုတ်ပေမယ့် များပြားလာတဲ့ ၀ယ်လိုအားအတွက် အရေအတွက် အများအပြားထုတ်လုပ်ရတဲ့ စက်ရုံတွေကနေ ကာဗွန်တွေ အများအပြားထုတ်လုပ်မှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒီလိုပါပဲ အ၀တ်အထည်နဲ့ အခြားအသုံးအဆောင်တွေမှာလည်း လိုချင်လို့ ၀ယ်တာထက် လိုအပ်လို့ ၀ယ်တာမျိုးကိုသာ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ လိုအပ်မှုဆိုတာ မဖြစ်မနေကို ဖြည့်ဆည်းပေးရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် လိုချင်မှု ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်မတို့လူသားတွေ ထိမ်းချုပ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ခရီးသွားလာရေးအတွက် ကျွန်မတို့တွေ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ယဉ်တွေကို မဖြစ်မနေ အသုံးပြုရတယ်။ လမ်းလျှောက်သွားသင့်တဲ့ နေရာကို လမ်းလျှောက်သွားမယ် ၊ ကားကို စီးသင့်မှစီးတာမျိုးလည်း လုပ်လို့ ရနိုင်ပါသေးတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်မတို့တွေ ကားဝယ်ချင်ကြတယ်။ လူတိုင်းသာ တစ်ယောက် တစ်စီး ကားပိုင်ကြမယ်ဆိုရင် လေထုညစ်ညမ်းမှုတွေဟာလည်း ပိုတိုးလာနိုင်ပါတယ်။ ဆင်းရဲသူ ချမ်းသာသူဆိုပြီး ရှိနေတာကိုတောင် ကျေးဇူးတင်ရမလို ဖြစ်နေပါပြီ။ ကားတစ်ယောက်တစ်စီး စီးတာထက် အများနဲ့မျှဝေပြီး အသုံးပြုလို့ရတဲ့ ဘတ်စ်ကား ၊ မီးရထား အစရှိတာတွေကို စီးရင်းနဲ့လည်း ရိုးရှင်းစွာ နေထိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Reuse – ပြန်သုံးကြည့်ကြပါ
ဟိုတစ်လောက မင်္ဂလာဆောင် တစ်ခု သွားစရာရှိလို့ အင်္ကျီတွေ ၊ ထမီအသစ်တွေ ၀ယ်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မမှာ ၀တ်စရာ မရှိလို့လား ဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ အသစ်ကလေးနဲ့ သွားချင်လို့ပါ။ အသစ် အသစ် ဆိုတာတွေကို လူတိုင်း သုံးချင်ကြပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အသစ် အသစ်တွေကို ထုတ်လုပ်မှုတွေကြောင့် စက်ရုံတွေကနေ အငွေ့တွေ အသစ် အသစ် ထပ်ထပ်ထွက်နေအုံးမှာပါ။ ဗမာစကားပုံ ရှိပါတယ်.. ရှိတာလေးနဲ့ လှအောင်ဝတ် ၊ ရတာလေးနဲ့ ၀အောင်စား ဆိုတာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းရေးအတွက် ပြောခဲ့သလားလို့တောင် မေးရမလို ဖြစ်နေပါပြီ။ စောစောက ကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ လိုချင်တပ်မက်မှုတွေကို ထိမ်းချုပ်နိုင်ဖို့ ကျွန်မတို့မှာ ရှိနေတာတွေကို ပြန်လည်အသုံးပြုတတ်အောင်လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် လေ့ကျင့်ပေးရမှာပါ။ ကျွန်မကတော့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ် ဒီနှစ်မှာ အ၀တ်အစားသစ်နဲ့ ဖိနပ်သစ်ဝယ်တာကို လုံးဝလျှော့ချပစ်မယ်လို့။ ဒီနှစ်ထဲမှာလည်း MYIA အနေနဲ့ Reuse Campaign လေးတစ်ခုလောက်တော့ ဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်မယ်လို့ စဉ်းစားထားပါသေးတယ်။
Pls Don’t Think Simple in Your Daily Routine – တစ်ခါ တစ်လေ ရိုးရိုးလေးပဲ မတွေးပါနဲ့
ကျွန်မတို့ ဈေးသွားတယ်။ ခပ်ရိုးရိုးလေးပဲ တွေးပြီး ပိုက်ဆံအိတ်တစ်အိတ်ပဲ ယူသွားတတ်ကြတယ်။ သဘောကတော့ ဈေးဝယ်ရင် ထည့်စရာ ကြွပ်ကြွပ်အိတ် ရမယ်ပေါ့လေ။ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်သာ သေသေချာချာတွေးမိရင် ဈေးခြင်းတောင်းတွေ ၊ အိမ်မှာ ရှိပြီးသား ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တွေကို တကူးတကကြီး သယ်သွားကြမှာပါ။ ဒါကြောင့် စေ့စပ်သေချာစွာ တွေးရင်း ကမ္ဘာမြေကို လှပအောင်လည်း ထားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်အသုံးကို လုံးဝ ဆန့်ကျင်နေတာ ၂၀၁၁ အစကတည်းကပါပဲ. ကျွန်မလိုပဲ တစ်ခြားသူတွေလည်း ထိထိရောက်ရောက် ဆန့်ကျင်နိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲရှင်။
နောက်ပြီး ကျွန်မတို့နေတဲ့ တိုက်တွေ ၊ လမ်းတွေ ၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွေကို ခပ်ရိုးရိုးပဲ တွေးပြီး အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ နေတတ်ကြတယ်။ လှေကားရင်းမှာ အမှိုက်ပုံနေတာတွေ ၊ အိမ်နောက်ဖေး ညစ်ပတ်နေတာတွေဟာ စည်ပင်သာယာရဲ့ အလုပ်လို့ ခပ်ရိုးရိုးပဲ တွေးတတ်ကြတယ်။ တစ်ကယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် လှပဖို့က ကိုယ့်အလုပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်နှိုးဆော်ပြီး ကိုယ်က စလုပ်ရင် သူများတွေလည်း လိုက်လုပ်ကြမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း ဒီအကျင့်ကို မွေးရအုံးမှာပါ။ အမှိုက်တွေကို နောက်ဖေးပြူတင်းပေါက်ကနေ ပြီးစလွယ် မပစ်ချပဲ အမှိုက်ပုံးထဲ သေချာထည့်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်း သိရက်နဲ့ လုပ်မိနေတာကို ထိမ်းချုပ်ရမှာပါ။
နောက်တစ်ခုက ကိုယ့်စိတ်လည်းကြည် ၊ တစ်ခြားသူတွေလည်း စိတ်ကြည်အောင် အိမ်ဝရံတာမှာ ပန်းပင်လေးတွေ စိုက်ပျိုးတာကို အိမ်တိုင်း လုပ်သင့်ပါတယ်။ အပင်လေးတွေကို ပြုစုရတာဟာ အပိုအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ ခပ်ရိုးရိုးမတွေးပဲ အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်လေး လှနေဖို့အတွက်လို့ သေသေချာချာလေး တွေးလိုက်ရင် တစ်ကယ်လည်း လုပ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ အချိန်လည်း သိပ်မယူ ၊ အလုပ်လည်း သိပ်မရှုပ်ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ နေ့စဉ်ဘ၀ထဲက ကိုယ့်အကျင့်တွေကို ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖို့ သေသေချာချာတွေးပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပြောင်းလဲသင့်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ရိုးရှင်းသောဘ၀မှာ နေထိုင်ဖို့ ကျွန်မတို့ရဲ့ အတ္တတွေကိုလည်း နည်းသထက် နည်းအောင် လုပ်ရပါမယ်။ လောဘကို ထိမ်းချုပ်တာ ၊ အများကို ကူညီတာ ၊ အမူအကျင့်တွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းယူတာ အစရှိတာတွေနဲ့ ဘ၀ကို ရိုးရှင်းစွာ ဖြတ်သန်းရင် နေထိုင်ရာ ကမ္ဘာကြီးကို ကာကွယ်ကြရအောင်လားရှင်။
Filed under Environment and tagged environment, simple lifestyle |	1 Comment
Green Steps for Green Environment
Posted on April 6, 2011 by cuttiepinkgold
“ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာကြီးကို ဘိုးဘေးများထံမှ ငှားယူထားခြင်းမဟုတ် ၊ သား၊ သမီးများထံမှ ငှားယူထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်” (အာဖရိက စကားပုံ)
အခုတလောမှာ ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်ဖို့ဆိုတဲ့စကားနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အလုပ်တွေကို လူကြီး လူငယ်မရွေးလုပ်ဆောင်လာကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လူတွေရဲ့ လောဘ ၊ ဒေါသ ၊ မောဟတွေနဲ့အတူ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့ စီးပွားရေးတွေကြောင့် ကျွန်မတို့လူသားတွေဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အရင်းအမြစ်ပေါင်းများစွာကို အညှာမတာထုတ်ယူသုံးစွဲလာခဲ့တာဟာ တော်တော်ကြီးကို ကြာခဲ့ပါပြီ။ ကမ္ဘာကြီးက ကျွန်မတို့ လူသားတွေအပါအ၀င် သက်ရှိအားလုံးအတွက် လိုအပ်တဲ့အရာမှန်သမျှကို ဖန်တီးပေးတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့တွေ လုပ်နေတဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေးအလုပ်တွေဆိုတာကကော၊ အမေ့ဆီက လိုသလောက်ကို လက်ဖြန့်တောင်းခဲ့ပြီးကာမှ အခု အမေကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ လိုချင်တာတွေကို မဖန်တီးပေးနိုင်တော့တဲ့အခါ ဘာမှ မရတော့မှာကို စိုးရိမ်လို့ အမေ့ကို ဆေးကုပေးတဲ့ သဘောလား ၊ ဒါမှမဟုတ် အမေ့ကို တစ်ကယ်နေကောင်းစေချင်လို့ အမေမှ မရှိရင် မဖြစ်တော့လို့ဆိုတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာစေတနာတွေနဲ့ စောင့်ရှောက်နေတဲ့ သဘောမျိုးလားဆိုတာကတော့ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ စိတ်သဘောထားအပေါ်မှာပဲ မူတည်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
သူများတွေ လုပ်သလိုပဲ ကမ္ဘာကြီးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ ၊ ပတ်ဝန်းကျင်သာယာလှပဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေအပြင် လူငယ်တွေရဲ့ အသိပညာ၊ စိတ်ခွန်အားနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို မြှင့်တင်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ကျွန်မတို့လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေး အလုပ်တွေကို လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဆိုတာက အသက် (၃၀) နှစ်အောက် လူငယ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Myanmar Youths in Action ၊ MYIA အဖွဲ့ကလေးပါ။ ဒီအဖွဲ့က သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းရေးအလုပ်တွေဖြစ်တဲ့ သစ်ပင်များစိုက်ပျိုးခြင်း ၊ သဘာပပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်း ပညာပေးဟောပြောခြင်းတွေကို အဓိကထားလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဦးတည်ချက်က လူငယ်တွေကို အသိပညာပေးဖို့ ဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်မတို့ လုပ်တဲ့ အလုပ်မှန်သမျှမှာလည်း လူငယ်တွေရဲ့ တက်ကြွမှုတွေ ၊ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေဟာ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်နေရာယူထားပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဧပြီလမှာလည်း ကျွန်မတို့လူငယ်တစ်စု ကျိုက်ထိုမြို့ကို အရောက်လှမ်းပြီး လူငယ်တွေရှိရာကို သွားရောက်ခဲ့ကြပြန်ပါပြီ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဦးတည်ရာ နေရာကတော့ ကျိုက်ထိုမှာရှိတဲ့ ဆိပ်ဖူးတောင် လူငယ်ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပရဟိတဂေဟာသို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဧပြီလဖြစ်တာကြောင့် ရာသီဥတုက တော်တော်လေးကို ပူပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ကျိုက်ထိုကို မနက်ခြောက်နာရီလောက်မှာ ထွက်ခွာခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် အရှေ့အရပ်ဆီမှာ မပေါ် တစ်ပေါ်မြင်နေရတဲ့ ရှင်နေမင်းရဲ့ အပူရှိန်တွေဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကို စောစောစီးစီးဖြန့်ကျက်ထားပြီးပါပြီ။ ကျွန်မတို့အဖွဲ့လည်း စောစောစီးစီး ချွေးဒီးဒီးနဲ့ပေါ့။ ရန်ကုန်ကနေ သုံးနာရီကျော်ကျော်လောက် ကားမောင်းပြီးတော့ ကျိုက်ထိုကို ရောက်ပါတယ်။ တည်းခိုဖို့ ကြိုတင်ဘွတ်ကင်ယူထားတဲ့ ရွှေမော်ကွန်း တည်းခိုခန်းမှာပဲ ပစ္စည်းတွေချ အနားယူပြီး ဆိပ်ဖူးတောင်ကို ကျွန်မတို့ သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆိပ်ဖူးတောင်ဟာ သဘာပတ်ဝန်းကျင်အမြင်အရ တော်တော်လေးကို လှပတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ သစ်ပင်တွေ အများကြီးစိုက်ပျိုးထားတာကြောင့် သစ်ရိပ်ဝါးရိပ်တွေနဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်းလည်း ရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရောက်တော့ ဂေဟာကို တာဝန်ယူရတဲ့သူတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မမေသက်နိုင်က လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲပဲ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဂေဟာရဲ့ ဥယာဉ်မှူး ဘုန်းဘုန်းဦးဇောတိက ကတော့ ခေါင်းနည်းနည်းမူးနေတာကြောင့် ကျွန်မတို့ရောက်အောင် မစောင့်နိုင်ပဲ ကျောင်းပေါ်ပြန်တက်သွားပါတယ်လို့ သူကပဲပြောပါတယ်။ ကျွန်မတို့အစီအစဉ်အတွက်လည်း အခမ်းအနားကို သေသေချာချာကို ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းရေး ဟောပြောပွဲဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကြီးနဲ့အတူ ခမ်းနားတဲ့ အပြင်အဆင်တွေကြောင့် ကျွန်မတို့အဖွဲ့မှာ အားတုံ့အားနာ ဖြစ်မိရပါသေးတယ်။ ကျွန်မတို့သွားတဲ့ အချိန်က ကျောင်းပိတ်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့် ဆိပ်ဖူးတောင် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဂေဟာက ကလေးတော်တော်များများ ရွာကို ပြန်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းမှာ စုစုပေါင်း ကလေး ၆၀၀ ကျော်လောက်ရှိပေမယ့် ခုချိန်မှာတော့ (၅၀) ကျော်ကျော်လောက်ပဲ ရှိပါတော့တယ်။ ကျွန်မတို့လည်း ရှိတဲ့ကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားတွေကို စုစည်းပြီး ဟောဖို့ ပြောဖို့ ပြင်ဆင်ရတာပေါ့။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေး ဟောပြောပွဲဆိုပေမယ့် ကျွန်မတို့အဓိကပြောဖြစ်ခဲ့တာကတော့ အချက်သုံးချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ သစ်ပင်တွေကို ကာကွယ်ပါ ၊ မလိုအပ်ပဲ ကြွပ်ကြွပ်အိတ် မသုံးပါနဲ့ ၊ အမှိုက်တွေကို စနစ်တကျပစ်ပါဆိုတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ပြောဖို့အတွက် သင်ထောက်ကူတွေအဖြစ် ဆရာအော်ပီကျယ်ရဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကာတွန်းတွေကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဆိပ်ဖူးတောင်က ကျောင်းသူ ကျောင်းသားလေးတွေဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ကြပါတယ်။ မြို့နေကျောင်းသားတွေလောက် ဗဟုသုတ မကြွယ်ဝကြပေမယ့် သူတို့လေးတွေကိုယ်တိုင်က ဆိပ်ဖူးတောင်မှာ သစ်ပင်တွေကို ကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးကြတာကြောင့် သစ်ပင်တွေအကြောင်းကို ပြောရတဲ့အခါမှာ အားတက်သရောရှိလှပါတယ်။ နောက်ပြီး သူတို့တွေကိုယ်တိုင်က ကျောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့အခါ ဂေဟာမှာ အတူနေကြတဲ့ မောင်ငယ် ၊ ညီမငယ်တွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေကို ဗဟုသုတတွေ ပြန်လည်ဝေမျှပေးမယ်လို့ ကတိပေးတာကြောင့် ကျွန်မတို့တွေ ပီတိဖြစ်ရပါသေးတယ်။
ကျွန်မတို့တွေဟာ ဆိပ်ဖူးတောင်မှာ ဟောပြောပွဲလေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင် ဆရာအော်ပီကျယ်ရဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာတွန်းတွေကို ဗီနိုင်းတွေထုတ်ပြီး ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကပ်တဲ့အစီအစဉ်လေးကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီက ဒေသခံတွေဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဗီနိုင်းတွေကို လိုလိုလားလားရှိကြပါတယ်။ သူတို့အတွက် ပညာပေးရာလည်းရောက်တာကြောင့် ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားက ဂေါပကအဖွဲ့တွေ၊ တောင်တက်မော်တော်ယဉ်အသင်းက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးက တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း ကျွန်မတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ လုပ်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့တွေလည်း ကျိုက်ထီးရိုးတောင်တက်ကားတွေ၊ ကင်မွန်းစခန်း၊ ရသေ့တောင်နဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားရဲ့ ဈေးဆိုင်တန်းတွေမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေး ပညာပေးဗီနိုင်းတွေကို ကိုယ့်မှာ ရှိသလောက် ကပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့လုပ်တဲ့ အလုပ်တွေကို အားပေးတဲ့သူတွေရှိတဲ့အပြင် လိုလားလက်ခံသူတွေလည်း အများအပြားရှိနေတာကြောင့် ဒီအစီအစဉ်လေးဟာ တော်တော်လေးကို အထမြောက်ခဲ့တဲ့ အစီအစဉ်လေးတစ်ခု ဖြစ်သလို Myanmar Youths in Action အဖွဲ့ရဲ့ မှတ်တိုင်လေးတစ်ခုလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဆိပ်ဖူးတောင်နဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အနေအထား ကောင်းမွန်တဲ့နေရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ စိမ်းစိမ်းစိုစိုတောအုပ်တွေကို ဖြတ်သွားရတဲ့ ဘုရားဖူးခရီးဟာ မောပန်းသမျှကို ပြေပျောက်စေပါတယ်။ ဒီလို တောတောင်သဘာဝကို ခံစားနိုင်တဲ့ခရီးမျိုး မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေခြင်းဟာ ကျွန်မတို့အတွက် ဂုဏ်ယူစရာလည်း ကောင်းလှပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း တန်ခိုးကြီးရုံသာမက ရင်သပ်ရှုမောစရာ သဘာဝအလှတွေရှိတဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးဟာ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ၀င့်ထယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလှပတဲ့ ရေမြေတွေကို ထိမ်းသိမ်းဖို့ဆိုတာ ဘုရားဖူးတိုင်းရဲ့ တာဝန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စည်းကမ်းမဲ့ အမှိုက်စွန့်ပစ်တာတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်သင့်ပြီး ဘုရားကို လှပရုံမက သန့်ရှင်းအောင်ပါ ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကင်မွန်စခန်းထိရောက်အောင်လာရတဲ့ ကားလမ်းရဲ့ ဘေးဘီတွေမှာ အငုတ်ပါမကျန်ခုတ်ထားတဲ့ ကျွဲကောစိုက်ခင်းတွေ ၊ တောမီးရှို့နေတာတွေကို မြင်ရတာတော့ စိတ်မကောင်းစရာ တစ်ခုပါပဲ။ ကျွဲကောစိုက်ခင်းတွေနေရာမှာ ရာဘာတွေကို အစားထိုးစိုက်ပျိုးမယ်လို့ သိရပေမယ့် ခုချိန်မှာ မြင်နေရတဲ့ ပြောင်သလင်းခါ မြင်ကွင်းတွေဟာ ခရီးသွားတွေရဲ့စိတ်ကို ညှိုးနွမ်းစေတာတော့ အမှန်ပါပဲ။
“ငါဟာ ပါမွှားလေးပါ ၊ ငါရဲ့လုပ်ရပ်တွေက မထိရောက်နိုင်ပါဘူးလို့ထင်ရင် အခန်းတစ်ခန်းတည်းမှာ ခြင်တစ်ကောင်နဲ့အတူ အိပ်ကြည့်လိုက်လေ” ဆိုတဲ့ အာဖရိက စကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာမြေကိုထိမ်းသိမ်းဖို့ ၊ ကျွန်မတို့တွေ နေစရာမပျောက်စေဖို့က ဘယ်သူ့အပေါ်မှာမှ တာဝန်ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ကိုတိုင်ကသာ တာဝန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ သေးငယ်တဲ့ လုပ်ရပ်ကလေး ဖြစ်စေဦးတော့ အကျိုးရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေစက်ရေပေါက်ကလေးတွေ တစ်စက်ချင်းစုစည်းလိုက်တဲ့အခါ ရေအိုင်ကြီးဖြစ်လာသလိုပဲ ကျွန်မတို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ ၊ အဖွဲ့လိုက်စီရဲ့ အလုပ်တွေကလည်း ကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သစ်ပင်လေးတစ်ပင်ကို ရှင်သန်ကြီးထွားအောင် စိုက်ပျိုးတာ၊ အမှိုက်ကလေးတစ်စကို အမှိုက်ပုံးထဲကောက်ထည့်တာကနေ အစပြုပြီး စွမ်းအင်ချွေတာတာ ၊ ကာဗွန်ခြေရာနည်းအောင် လုပ်တာတွေထိ အချင်းချင်းလက်ချင်းတွဲပြီး လုပ်ဆောင်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ရဲ့ အစိမ်းရောင်ခြေလှမ်းလေးတွေနောက်ကို လိုက်လျှောက်ကြမယ့် လူငယ်တွေကို ကျွန်မတို့ လိုအပ်သလို ၊ ကျွန်မတို့ လျှောက်လမ်းနေစဉ်မှာ အင်အားတွေပေးကြမယ့် လူကြီးတွေကိုလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျွန်မတို့ရဲ့ ခြေလှမ်းစိမ်းစိမ်းတွေကို အစဉ်အမြဲရှင်သန်စေဖို့ ထိမ်းသိမ်းရမယ့် နောင်လာနောက်သားတွေဆိုတာလည်း ရှိနေမှ ဖြစ်မှာပါ။ ဒီအစဉ်အလာရှိလာဖို့ ဆိုတာကလည်း ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင်က တည်ဆောက်ခဲ့မှ ဖြစ်လာမှ မဟုတ်ပါလားရှင်။ ဒါကြောင့် ဒီအသက်အရွယ်ကနေစလို့ ခြေလှမ်းစိမ်းစိမ်းလေးတွေသာ မနားတမ်းဆက်လှမ်း ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ရဲ့ နောင်လာနောက်သားတွေဆီကနေ ငှားယူထားတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကိုလည်း အကောင်းအတိုင်းပြန်လည်ပေးအပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Did you work for Number 350?
Posted on October 14, 2010 by cuttiepinkgold
What does the number 350 means to you? Do you think that 350 is justamere number? And do you want to ask me back that why we must work for number 350? If you are environmental activist or you aware the environmental issues, you’ll definitely know what 350 means.
When talking about the climate change, Green House Gas including carbon dioxide plays in the critical role. When we look back to the history, carbon dioxide ration in the atmosphere has been increased since the beginning of the industrial revolution. The level of carbon dioxide during pre-industrial time was around 280 ppm (Parts per million) and the world had very moderate climate. Now the carbon dioxide level reach 388.5 ppm that isavery dangerous number for the whole world harming it with many kinds of disaster around. That’s why I asked you working for 350.
So what is 350?
Oh! I’m talking too much. In this year, many countries around the world are participating 350 campaigns on 10 Oct 2010 (10.10.10) with the purpose of reducing the CO2 level to 350. According to the registration at 350.0rg, there are 188 countries campaigning over 7,000 events for climate justices. I also worked on that day by planting 350 trees.
I believe that trees are the best thing that can reduce the carbon dioxide as it inhale CO2 for its survival. So, I decided to plant trees on 10.10.10. So, together with members from our organization, Myanmar Youths in Action, I joined Symbolic 350 Trees Planting Party mainly organized by Spectrum (Sustainable Development Group), WRTC, Emerald Green, Global Green and AGMP (Action Group of Myanmar Poet). My special thanks goes to all organizers that allow us to join that event. If not, I’m not sure that MYIA alone could plant that number of trees.
Early in the morning on that day, we left to Lay Dount Kan where our planted area Shwe Bon Oo monastery is located. There were around 100 participants including young and adult environmental activists. Emerald Green donated 350 plants of 14 species for our event. I feel so happy seeing suchagreat number of participants for 350 campaign. I’m sure that the other environmental activist would definitely worked for 350 on the same day around Myanmar. Yes! Myanmar is alsoaactive country working for environmental protection.
Venerable Sayadaw (Head Monk) from Shwe Bon Oo monastery is kindhearted, virtue, generous and provided us everything we needed. Sayadaw also served us lunch and snacks and said thanks to us for plaiting in his monastery compound. Environmentalist, Sayama Devi Thant Sin, shared their valuable knowledge and encouraged young people to actively participate in saving our earth. Famous Myanmar poet Maung Lynn Yeik from AGMP (Action Group of Myanmar Poet) also recitedaverse of Salae U Pon Nya to honor the tree planting event. The verse is what we call Taw – Lar (composition of the beauty and advantage of forests) in Myanmar Literature.
Lay-men from the monastery helped us in digging the hole for planting. I could also see that Unity is Strength, team work can get successful results. See, within one day, we could plant all 350 plants.
People working for number 350
Youths and Adults together
C’mon guys, let’s work together to save our earth.
Let’s work together to reduce the carbon dioxide level to 350.
Filed under Environment and tagged 350, carbon dioxide |	3 Comments
The Giving Tree ဟာ သစ်ပင်တစ်ပင်နဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်အကြောင်းကို ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ကလေးပုံပြင်လေး တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံပြင်လေးကို Shel Silverstein က ရေးသားခဲ့ပြီး သူကိုယ်တိုင်ကပဲ ပုံဖော်ရေးဆွဲပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီပုံပြင်လေးကို ၁၉၆၄ ခုနှစ်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ဘာသာစကားပေါင်း ၃၀ ကျော်သို့ ပြန်ဆိုထုတ်ဝေခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ The Giving Tree ဟာ သစ်ပင်နဲ့ လူတို့ရဲ့ ဆက်စပ်မှုအကြောင်းကို ရေးသားထားတဲ့ ပုံပြင်လေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူးရှင်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း ကြိုက်နှစ်သက်တာကြောင့် ဒီမှာ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။ Read the rest of this entry →